Iindaba -Ulwazi olunxulumene nomnatha wesinyithi
Umnatha wocingo lwentsimbi ongenasiphelo njengangoku yeyona nto ixhaphakileyo, isetyenziswa ngokubanzi, kwaye inkulu kakhulu ngocingo lwesinyithi kwintengiso. Eqhelekileyo ekubhekiswa kuyo enemingxuma insimbi ikakhulu kubhekiswa stainless steel mesh ephothiweyo.
Okokuqala, masiqonde impembelelo yezinto ezininzi eziphambili zentsimbi engenasici ekusebenzeni kwensimbi engenasici:
1. IChromium (Cr) yeyona nto iphambili emisela ukumelana nokubola kwentsimbi engenasici. Ukubola kwensimbi kwahlulwe kwaba kukubola kwemichiza kunye nokungabikho kwemichiza. Kumaqondo obushushu aphezulu, isinyithi siphendula ngokuthe ngqo ngeoksijini esemoyeni ukwenza i-oxides (irusi), yona leyo kukumelana neekhemikhali; kubushushu begumbi, le ntsholongwane ayisiyomhlwa. I-Chromium kulula ukuyila ifilimu yokuhamba engqindilili kwi-oxidizing medium. Lo mboniso bhanya-bhanya we-passivation uzinzile kwaye ugqibelele, kwaye ubotshelelwe ngokuqinileyo kwisiseko sesinyithi, ukwahlula ngokupheleleyo isiseko kunye nendawo, ngaloo ndlela kuphucula ukumelana nokubola kwe-alloy. I-11% ngowona mda usezantsi we-chromium kwintsimbi engenasici. I-Steels ene-chromium engaphantsi kwe-11% ngokubanzi ayibizwa ngokuba yintsimbi engenasici.
2. I-Nickel (i-Ni) yinto ebaluleke kakhulu ekumelaneni nomhlwa kunye nezinto eziphambili ezenza i-austenite ngentsimbi. Emva kokuba i-nickel yongezwa kwintsimbi engenasici, isakhiwo sitshintsha kakhulu. Njengoko umxholo we-nickel kwisinyithi esingenasici ukwanda, i-austenite iya kunyuka, kunye nokuxhathisa umhlwa, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, kunye nokusebenza kwentsimbi engenasici kuya kunyuka, ngaloo ndlela kuphuculwe inkqubo yokusebenza ebandayo yentsimbi. Ke ngoko, intsimbi engenasici enomxholo ophezulu we-nickel ilungele ngakumbi ukuzoba intambo entle kunye nocingo oluncinci.
3. I-Molybdenum (Mo) inokuphucula ukumelana nokubola kwentsimbi engenasici. Ukongezwa kwe-molybdenum kwintsimbi engenasici kunokuqhubela phambili ukuhamba kwensimbi engenasici, ngaloo ndlela kuphuculwe ukunganyangeki kwentsimbi engenasici. I-Molybdenum ayinakho ukwenza imvula ngentsimbi engenazintsimbi ukuhambisa i-molybdenum, ngaloo ndlela kuphuculwe ukuqina kwesinyithi.
4. Ikhabhoni (C) imelwe ngu- "0" kwimpahla yentsimbi engenasici. U - "0" uthetha ukuba umxholo wekhabhoni ungaphantsi okanye ulingana no-0.09%; "00" kuthetha ukuba umxholo wekhabhoni ungaphantsi okanye ulingana no-0.03%. Ukunyusa umxholo wekhabhoni kuya kunciphisa ukunganyangeki kwentsimbi engenasici, kodwa kunokwandisa ubunzima beentsimbi ezingenasici.
Zininzi iindidi zamabakala e-stainless steel, kubandakanya i-austenite, ferrite, martensite kunye ne-duplex insimbi. Ngenxa yokuba i-austenite inentsebenzo ebanzi kakhulu, ayinamandla kwaye inobunzima obuphezulu kunye neplastikhi, isetyenziselwa ukuhambisa umnatha. I-Austenitic insimbi engenasici yiyona nto ingcono yentsimbi engenasici. I-Austenitic insimbi engenasici ine-302 (1Cr8Ni9), 304 (0Cr18Ni9), 304L (00Cr19Ni10), 316 (0Cr17Ni12Mo2), 316L (00Cr17Ni14Mo2), 321 (0Cr18Ni9Ti) kunye nezinye iimveliso. Ukujonga umxholo we-chromium (Cr), i-nickel (Ni), kunye ne-molybdenum (Mo), i-304 kunye ne-304L yocingo inentsebenzo elungileyo kunye nokumelana ne-corrosion, kwaye ngoku lucingo olunelona nani likhulu le-stainless steel mesh; I-316 kunye ne-316L iqulethe i-nickel ephezulu, kwaye iqulathe i-molybdenum, yeyona ilungeleyo ukuzoba iingcingo ezintle, kwaye inokumelana kakuhle nomhlwa kunye nokumelana nobushushu obuphezulu. Umnatha oxineneyo-oxineneyo awuyiyo enye ngaphandle kwawo.
Ukongeza, kufuneka sikhumbuze abahlobo bomnxibelelanisi wocingo ukuba ucingo olungenasici luneziphumo zexesha. Emva kokuba ibekwe kubushushu begumbi kangangexesha elithile, ukuqhubekeka koxinzelelo lokusombuluka kuncitshisiwe, ke ucingo lwentsimbi olungenasici emva kwexesha kubhetele ukuba lusetyenziswe njengolukiweyo.
Ngenxa umnatha insimbi uneempawu ukuxhathisa asidi, ukumelana kwealkali, ukumelana eliphezulu lobushushu, uqine amandla kunye nokumelana lingonakali, ingakumbi ezifanelekileyo ukuhlolwa izinambuzane lokucoca umnatha phantsi asidi kunye neemeko zealkali yokusingqongileyo. Umzekelo, ishishini leoyile lisetyenziswa njengescreen sodaka, umzi mveliso wefayibha yemichiza usetyenziswa njengesihluzi sescreen, ishishini lokuchwetheza lisetyenziswa njengescreen sokukha, kunye nesinyithi, irabha, indawo yasemoyeni, ezomkhosi, amayeza, ukutya kunye namanye amashishini. zisetyenziselwa ukuhluza igesi kunye nolwelo kunye nolunye ulwahlulo lweendaba.